I-Cozy Bright 1 Bedroom Apt ~ Icocekile ~ I-Wifi ekhawulezayo
Yonwabela indawo ecocekileyo, eqaqambileyo, enemoya ekwintliziyo yendawo yokuhlala enenjongo yoluntu. Eli ligumbi elinye elinesiqingatha esikwisiseko esisezantsi kwisakhiwo esihlaziyiweyo se-1960s 6-plex ngaphaya kwekhaya lethu. Siye saphucula iyunithi nganye kwaye safaka iiphaneli zelanga kuphahla olutsha ukwenza indawo enomtsalane enokuhlalwa kwiingcali eziselula ezonwabelayo indawo yazo yabucala kwindawo edibeneyo.
Indlu ecocekileyo ene-HD Fibe TV, ibhedi ekhululekileyo enebhedi ephindwe kabini kunye neyodwa phezulu. Ibhedi yoSuku lwe-Ikea Hemnes kwigumbi lokuhlala isebenza njengesofa emini kwaye iguqulelwa ekubeni yibhedi yobukhulu bokumkani ukuba kuyimfuneko ebusuku. Indawo yokuhlamba yemali ibekwe ngokufanelekileyo kulo lonke iholo.
4.88 ·Izimvo eziyi-138
4.88 · Izimvo eziyi-138
Ubumelwane bethu luvavanyo lokuyila lokuphila ngokwahlukileyo--uluntu oludityanisiweyo lwabamelwane ababelana ngokutya kunye namabali, abanomdla ngabantwana abadlala ngokupheleleyo, ukuba nomdla kunye nokuphonononga imibuzo efanele ukubuzwa.
Izimvo eziyi-1 295
Sihlala ngaphaya kwendlela kwaye siyafumaneka ukuba ufuna ukuncokola kwaye uqhagamshele, kwaye siyakuvuyela ukuhlonipha ubumfihlo bakho ukuba ufuna ixesha lokuphumla wedwa.